Ny ambasadaoro dia ambasadaoro mangina amin'ny marikao. Martech Zone
Ny endrika mahomby iray dia mety hanampy anao hihoatra ny mpifaninana aminao. Araka ny Institute momba ny fitantanana endrika, ireo orinasa nisafidy famolavolana mandresy lahatra dia naharesy ireo orinasa hafa manana endrika malemy amin'ny index S&P hatramin'ny 219%.
Etsy ankilany, Fanadihadiana nataon'i Tyton Media namarana ihany koa fa 48% amin'ny olona no mamaritra ny fahatokisan'ny orinasa amin'ny alàlan'ny famolavolana tranokala. Ireo statistika ireo dia mifanaraka amin'ny hevitry ny mpamorona sary malaza, Paul Rand izay nihevitra ny famolavolana ho ambasadaoro mangina amin'ny marikao.
Ankoatr'izay, ny famolavolana dia mamorona fiteny hita maso tsy tapaka sy fifandraisana eo noho eo amin'ny vokatrao na serivisinao, mampitombo ny fahamendrehana sy ny fanekena ny marikao. Amin'ny maha-tompona orinasa anao dia mila mamorona fahatsapana maharitra ianao. Izay no idiran'ny endrika ary ahafahanao mirotsaka sy manentana ny mpanjifanao na ny mpihaino kendrenao.
Ny famolavolana tsara dia misy typefaces, loko loko, fotoana fandefasana, ary endri-pitiavana finday. Ireo antony ireo dia mety hampitombo ny fahafahanao mahazo fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao.
Nahoana no zava-dehibe ny famolavolana?
Ny mason'ny olona ihany no takiana 2.6 segondra hifantoka amin'ny singa manokana amin'ny pejin-tranonkala iray, hoy ny mpikaroka avy ao amin'ny University of Science and Technology an'ny Missouri. Ny famolavolana mpampiasa-namana dia mety hisy fiantraikany amin'ny hevitr'izy ireo.
Manana [fahatsapana] momba ny orinasanao ny olona mifototra amin'ny zavatra niainany tamin'ny marika iray. Ny sary famantarana sy tranokala voaomana tsara dia mitaona ny fahatokisan-tena satria toa matihanina. Raha toa ka vonona ny hifantoka amin'ny famoronana endrika madio sy miasa mora ampiasaina ny orinasa iray, dia mety ho famantarana ny fampiasana izany vokatra izany.
Adriana Marin, talen'ny zavakanto mahaleo tena
Ny endrika tsara dia mampita ny hafatrao amin'ny fomba mahomby indrindra:
Ny famolavolana tsara dia manampy amin'ny fampitana ny hafatrao, ny lanja entina hanodinana ny resaka varotra ary ny fandaminana ny fampahalalana amin'ny fomba mandaitra indrindra ho an'ny tsena marina tadiavinao. Ny famolavolana sy ny fandefasan-kafatra mahomby amin'ny fiaraha-miasa mba hampitana ny lanjan'ilay orinasanao ara-dalàna ary, indrindra indrindra, tsy hadino izany.
Lilian Crooks, Mpamolavola sary ary manampahaizana manokana momba ny fifandraisana ao amin'ny Harcum College
Fantaro fa ny famolavolana tsara dia tsy voafetra amin'ny tranokala na Logo. Mila mifantoka amin'ny fonosana na famolavolana vokatra koa ianao. Rehefa mampita ny hafatrao ny vokatrao, mamaritra ny soatoavinao ary manintona ireo mpihaino kendrenao ianao, dia mety hamorona marika mahafinaritra ianao.
Ny famolavolana tsara dia manampy anao hisongadina
Ny endrika dia afaka manamboatra na manimba ny orinasanao. Raha maharesy lahatra sy mandeha io dia azo inoana fa hisongadina eo amin'ireo mpifaninana aminao ianao. Tsy tsiambaratelo ny fahitan'ny olona ny vokatra misy endrika maoderina sy manaitra.
Ohatra, amin'ny farany ianao dia hanintona vokatra manokana misy endrika famolavolana fenomenal sy fonosana maoderina. Matetika ny olona dia manana fiheverana miangatra amin'ny hatsaran-tarehy.
Manana fitongilanana manintona ny zanak'olombelona; hitantsika ho tsara kokoa ny zavatra tsara tarehy, tsy maninona na dia tsara kokoa aza izany. Mitovy daholo ny zavatra hafa rehetra, aleontsika ny zavatra tsara tarehy, ary mino izahay fa ny zavatra tsara tarehy dia miasa tsara kokoa. Toy ny natiora, ny fiasa dia afaka manaraka endrika.
Steven Bradley, Mpanoratra ny Fototra famolavolana
Ankoatr'izay, ny fanadihadiana iray dia nilaza ihany koa fa azonao atao ny manombana ny fiangaviana sary ao anatin'ny 50 milliseconds. Amin'ny maha-mpamorona anao dia mila manaova fahatsapana ianao, alao ny saina ao anatin'ireo 50 milliseconds mampita hoe iza ianao ary inona no ataonao.
Ho azonao ny fotokevitra amin'ny fijerena ireo marika kosmetika; Anatomika ary Cetaphil.
Cetaphil dia mampiasa rafitra miloko tsotra sy miloko ary tsy misy anaran'ny vokatra mahafinaritra, mametraka feo matotra. Ny tsipika vokatra dia natao hanehoana fa ny marika dia momba ny vokatra sy ny fiasan'izy io. Fa kosa, Anatomicals misafidy anarana vokatra mampihomehy sy karazana endritsoratra lehibe.
Mampiasa loko marevaka izy ireo ary mametraka feo malefaka. Ianao koa dia mila mifantoka amin'ireo lafin-javatra lehibe tianao hampitaina amin'ny mpanjifanao ary manome toky fa hita taratra amin'ny famolavolana vokatrao izy ireo.
Mampiroborobo ny tsy fivadihan'ny marika ny famolavolana
Azonao an-tsaina ve Google mampiseho valin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny endritsoratra miafina na sary famantarana mavokely an'i McDonald? Fantatray fa sarotra ny mieritreritra an'ireo fanovana ireo.
Ny layout Google sy ny sary famantarana an'i McDonald dia mihoatra ny singa famolavolana; izy ireo dia ampahany manandanja amin'ny marika misy azy ireo ary ohatra tsara amin'ny tsy fitovizan'ny marika.
Ilaina ny tsy fitoviana rehefa te-hanangana marika iaraha-miasa ianao. Azo lazaina fa ny lalàna mifehy izay miantoka ny fahombiazan'ny marikao.
Ireo marika roa voalaza etsy ambony ireo dia nifantoka tamin'ny famoronana marika tsy miova izay mampiditra singa tsy hay hadinoina.
Mampiroborobo ny fanekena ny marika izay mitarika amin'ny firotsahana farany ambony.
Mampitombo ny sandan'ny marika izay mety hampiroborobo ny varotra.
Manampy anao hiavaka amin'ny indostria.
Etsy ankilany, marika tsy mifanaraka no toa misavoritaka, tsy milamina ary misafotofoto. Izy io koa dia mety hanimba ny fahatokisana ny orinasanao sy hametra ny fahafahanao hahita fahombiazana.
Ankoatr'izay, mila mandinika ny marikao ianao ho toy ny mombamomba ny orinasanao. Noho izany, tokony haseho ireo toetra tsara indrindra amin'ny orinasanao na orinasanao hampiasana ny mpihaino.
Ary koa, ny fanaovana vivery ny lao ny fampiasanao sary vongana na ny lokony rehefa ampifanarahana malalaka dia mitarika tsy fitoviana ihany koa. Ny olona mazàna manadino marika tsy mifanaraka. Satria tsy afaka mieritreritra loko na marika manokana izy ireo rehefa miresaka momba izany.
Ohatra, rehefa miresaka Coca Cola, azonao atao sary an-tsaina fa manana loko mena aminy ny sary famantarana azy. Ary rehefa sendra ny Nike logo, azonao atao ny mamantatra azy ho toy ny marika kiraro na fanamboarana akanjo.
Noho izany, raha tsy afaka mampifangaro loko manokana amin'ny marika na tsy mahalala ny sary famantarana azy ny mpihaino kendrenao dia mety mila miasa amin'ny famolavolana ianao ary ataovy mifanaraka amin'izay hahitan'ny mpihaino anao azy mora foana.
Garner Customer Trust amin'ny famolavolana tranokala namana
Tsy azo lavina fa misy olona mifanerasera amin'ny orinasa voalohany amin'ny alàlan'ny tranokalany. Noho izany, ny fiheverana ny tranokalanao dia zava-dehibe tokoa tokony hodinihina. Ny famolavolana tranokala tsara dia afaka manampy amin'ny famelana fiantraikany maharitra amin'ny mpitsidika tranokalanao.
Ireo tranonkala manana endrika ratsy dia tsy atokisana na zahana mandritra ny fotoana lava.
Ny famolavolana interface tsara dia mifandraika indrindra amin'ny fandavana haingana sy ny tsy fahatokisana tranonkala iray, "ary nanampy hoe," Amin'ny tranga izay tsy tian'ireo mpandray anjara ny lafiny sasany amin'ny famolavolana dia matetika no notadiavina ilay tranonkala fa tsy ny pejy fandraisam-bahiny ary tsy noheverina ho mety hamerina hitsidika azy daty manaraka… ”
CrazyEgg, tena ilaina ve ny famolavolana tranonkala tsara?
Tranonkala vaovao manokana
izany mpiantoka amin'ny tafo any Indiana Indiana tsy nahazo naoty iray na iray aza mahay avy amin'ny tranokalan'izy ireo tamin'ny taona lasa. Ilay tranonkala vaovao, namboarina sy novolavolain'i Highbridge namokatra mpitarika am-polony mahery am-polony isam-bolana taorian'ny nanombohana - miaraka amin'ny fifamoivoizana mitovy. Ny personalization, ny mari-pahaizana momba ny fifampitokisana, ny sary tena izy ary ny firesaka olona dia miresaka mivantana amin'ireo mpitsidika tsy misy isalasalana ny tolotra natolotra.
Mitaona ireo mpanjifa miaraka amina endrika famonosana fiangarana
Ny famolavolana fonosana ny vokatrao na ny entanao dia mitovy amin'ny famolavolana tranokala. Ny mpanjifanao dia mandoa ny vokatra na serivisy ary voataonan'ireo fonosana amin'ny scenario roa tonta.
Ankoatra izany, Blink - boky nosoratan'i Malcolm Gladwell miresaka momba ny teboka amin'ny antsipiriany fa ny fanampiana na ny fikitika kely amin'ny famolavolana fonosana dia afaka mamolavola ny fahitan'ny mpanjifa ny vokatra.
Ary koa, izy ireo dia mihevitra ny vokatra iray ho toy ny fitambaran'ny fonosana ary vokatra.
Raha manampy mavo 15 isan-jato kokoa amin'ny maitso amin'ny fonosana 7 UP ianao dia mitatitra ny olona fa misy voasarimakirana na voasarimakirana bebe kokoa io, na dia avela tsy voakitika aza ilay zava-pisotro. Amin'ny can'ny Chef Boyardee Ravioli, sarin'ny fanakaiky ny tena endrik'olombelona dia misy fiatraikany kalitao mihoatra ny fitifirana vatana iray manontolo na ny sarimiaina… Ny 'm' dia mahatonga ny mpanjifa hahatsapa ireo vokatra ho vaovao kokoa.
Ireo ohatra ireo dia mampiseho fa ny fonosana dia misy fiantraikany amin'ny fahatsapan'ny mpanjifa, ny kalitaony ary koa ny tsiron'ny vokatra. Raha mandinika akaiky ianao, ny ohatra 7 UP dia milaza fa ny mpanjifa dia manana fikambanana samihafa amin'ny fihetsiky ny volon'ondry sy hazavana manokana momba azy io.
Noho izany, ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny famolavolana kajy dia manampy amin'ny fomba fahitan'ny mpanjifanao, fahitany sy fandaniana ny vokatrao.
Ahoana ny fanovan'ny Brand ny Logo azy ireo hampitomboana ny firotsahan'ny mpampiasa
Batman History History
Betsaka ny mpilalao tantara an-tsary malaza dia marika iray amin'ny azy manokana, indrindra ireo izay nanana franchise tamin'ny sinema rehetra. Iray amin'ireo malaza indrindra logo mahery fo dia i sportman Batman. Ny marika malaza amin'ny ramanavy amin'ny sidina dia novaina imbetsaka hatramin'ny nanombohany, miaraka amin'ny sary famantarana vaovao navoaka tamin'ny 2000 izay mampiseho ny tena toetra maizina sy toetran'ny olona asehony.
Ampitomboy ny famantarana ny marika amin'ny famolavolana Logo
Ny sary famantarana dia singa iray manandanja amin'ny marika rehetra. Ny endriny dia mila manintona nefa matihanina. Orinasa maro no tsy mahalala ny lanjan'ny famolavolana sary mieritreritra tsara sy mahasarika. Matetika izy ireo dia mandeha amin'ny logo efa vita na misafidy fomba fanaovan-tena.
Ankoatr'izay, ny famolavolana sary famantarana dia tsy ny fisafidianana haingo mamirapiratra sy typografika tokana. Saingy mila taratra ny marikao, mampita ny hafatry ny orinasanao, manana palitao sy loko miloko mety. Marina fa ny sary famantarana tsara dia mampiseho ny tena sarin'ny orinasanao sy ny soatoavinao.
Ny fango tsotra, tsy miova ary tsy hay hadinoina dia mety hahasoa. Raha mandefa marika ianao na mikasa ny hampiditra refy vaovao amin'ny logo misy anao, dia azonao atao ny mifantoka amin'ny fironana, ny mombamomba ny marika sy ny sandanao mba hahazoana antoka fa mampivelatra ny fahalianan'ny mpihaino lasibatra manodidina ny marika anao ny logo anao.
Tantaran'ny FedEx Logo
Raiso ohatra ny sary famantarana an'i FedEx. Ny fampiasana loko volomboasary sy volomparasy dia mampiditra ny fahatsapana sy ny fahazavana. Raha mandinika akaiky ianao dia milaza ny handroso ilay zana-tsipika aseho eo anelanelan'ny litera E & X.
Azonao atao koa ny manandrana mifantoka amin'ireo singa manan-danja toy izany ary mampiditra azy ireo ao amin'ny sary famantarana anao mba hampisy fahatsiarovan-tena, indrindra raha toa ka orinasam-pandraharahana na lozisialy ny marikao. Aza adino anefa ny mianatra ny fomba fanaovana copyright ny sary iray hiarovana azy amin'ny fanaovana piraty.
Hafatra marika amin'ny loko miaraka amin'ny loko
Efa nieritreritra ve ianao hoe maninona ny manam-pahaizana no manantitrantitra ny fisafidianana ny loko mety? Ireo loko ireo dia manampy amin'ny fandikana ny hafatrao ary hampiroborobo ny fanekena ny marika.
Raha misafidy am-pitandremana ianao dia manampy amin'ny famoahana ny karazana fihetsem-po mety ny paleta miloko amin'ny logo anao. Ohatra, Louis Vuitton dia mampiasa loko mainty amin'ny sary famantarana azy ireo izay mahatonga azy io ho marika ambony sy lafo vidy.
Safidio ny endritsoratra mety
Ny endri-tsoratra dia mpampahalala ny sary famantarana anao ary misy tanjona voafaritra tsara. Afaka mamorona amin'ny fisafidianana endritsoratra ianao. Fa tsara kokoa ny mampiasa font iray amin'ny logo.
Rehefa misafidy ny endritsoratra ho an'ny sary famantarana anao dia fantaro fa ireo sahisahy dia heverina ho endriky ny lahy ary ireo endrik'olona voaozona dia fantatra ho endri-behivavy.
Azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny fampiasana typefaces boribory satria maneho ny fikolokoloana, ny fahalemem-panahy ary ny fahalemem-panahy.
Mifantoha amin'ny fiantraikany amin'ny endrika
Fantatrao ve fa ny bikan'ny logo anao dia mety hanatsara ny dikan'ny marika?
Nanazava ny Logo BMW
Ohatra, ny endrika boribory dia hita taratra ny fahatsarana, ny fiaraha-monina, ny fiaretana na koa ny maha vehivavy azy, fa ny endrika efajoro na ireo manana sisiny mafy sy maranitra dia mandefa hafatra momba ny tanjaka, matihanina, mahay mandanjalanja ary mahomby.
Etsy ankilany, ny famolavolana triangles dia afaka manampy amin'ny fampitana hevitra matanjaka, ara-dalàna na ara-tsiansa.
Ny Design dia afaka manampy amin'ny fanitarana ny mpihaino kendrenao
Te hanana tsena hafa ve ianao? Andramo alefa ny fonosanao efa misy. Raha manana marika iray izay namokatra vokatra fikarakarana hoditra manokana ho an'ny vehivavy ianao, dia mbola afaka mikendry ny tsenan-dehilahy.
Tsy ilaina ny manao fifandimbiasana lehibe amin'ny volavolanao. Ary mba hanintonana ny demografika masculine, azonao atao ny misafidy fanovana endrika tsotra.
Ohatra, Nivea dia manolotra karazana vokatra fikarakarana manokana, ao anatin'izany ny menaka, menaka fanosotra na fofona deodorants ho an'ny vehivavy. Ary koa, ny marika dia nahavita nanatombo ny tsenan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fikendrena demografika lahy amin'ny endriny maranitra sy masculine.
Araka ny Ny Conseil Design fandalinana, orinasa fampandrenesana endrika hamolavola vokatra na serivisy vaovao indroa raha oharina amin'ireo orinasa tsy mifantoka amin'ny endrika famolavolana. Noho izany, eritrereto ny toerana mety hitondranao ny marikao amin'ny alàlan'ny fanitsiana vitsivitsy.
Fampiasam-bola amin'ny famolavolana
Tsy isalasalana fa ny famolavolana dia mety hisy fiatraikany lehibe eo amin'ny orinasanao na ny marikao. Miharihary fa ny famolavolana tsara dia mitondra tombony samihafa, ao anatin'izany ny sisin'ny fifaninanana, ny valin'ny tsena mahaliana ary mampiavaka anao amin'ny vahoaka.
Amin'ny maha ambasadaoron'ny marika anao dia manampy amin'ny fananganana fahatokisana ny mpanjifa ny tanjona, mikendry tsena vaovao, mampiroborobo ny tsy fitovizan'ny marika, manome fiatraikany am-po, ary manomboka fanentanana mahomby, sns. Noho izany, tsara kokoa ny mifantoka amin'ny volavola sy ny singa hahomby. Satria ny fampiasam-bola amin'ny famolavolana farany dia midika hoe manambola amin'ny fahombiazanao maharitra.
Fampahafantarana: Ity lahatsoratra ity dia novaina mba hahitana rohy mpiara-miasa ary koa ohatra iray an'ny mpanjifa Douglas Karrmafy orina, Highbridge.
Tags: Adobeadriana marinanatomicalstalen'ny zavakantotantaran'ny sary batmanfahatokisana marikafanekena marikaCetaphilcoca Colatetika lokofahatokisan'ny mpanjifafamolavolanafototra famolavolanainstitiota fitantanana famolavolanafikarohanafandalinana famolavolanaGooglemarika googleoniversite harcummpisoloky lilyLogoloko logofamolavola logoendrika logosary famantarana an'i mcdonaldanjerimanontolo science sy teknolojia missouriNikepaul randfamolavolana vokatrasteven bradleytypefaceshaino aman-jery tytonfiteny hita maso